tegory_title% Mpanamboatra | Orinasa mpanome fanafody anti-parasitika any Sina
FANAMPINY PROUDUCT: INDRINDRA NY spectrucm Dewormer ho an'ny fitsaboana sy fifehezana ny Roundworms, kankana havokavoka ary ny Tapeworms. DOSAGE SY ADMINISTRATION: 1ml isaky ny lanjan'ny vatana 3kg na araka ny torolalan'ny mpitsabo biby.Safe ho an'ny biby tanora sy bevohoka. STORAGE: Mitahiry amin'ny hafanan'ny efitrano voafehy (15-30
PROUDUCT Details Indication: anthelmintic spectrum malalaka ho an'ny fitsaboana aretina mifangaro amin'ny nematode gastrointestinal sy cestodes amin'ny alika sy saka. Roundworms Ascarids Toxocara canis, (tsy matotra, olon-dehibe), Toxocara cati, (olon-dehibe), Toxascaris leonina (tsy matotra, olon-dehibe) granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidi ...
Nitenpyram 57mg ho an'ny tablette anti-flea momba ny biby dia takelaka am-bava
Mamono parasy ho an'ny olon-dehibe amin'ny alàlan'ny mora amin'ny takelaka am-bava azo antoka mba homena matetika isan'andro indray mandeha raha misy ny re-infestation. Ny takelaka tahiry Tinenpyram taloha dia mitsabo aretim-parasy amin'ny biby fiompy. Manomboka mamono parasy ho an'ny olon-dehibe ao anatin'ny 30 minitra. Ampiasao rehefa mety ho tratry ny parasy ny biby fiompy, toy ny any amin'ny valan'alika, amin'ny seho, na amin'ny faritra hafa. Azo ampiasaina koa alohan'ny fandidiana, ny fitaterana an-trano, na ny ...
Fampiasana doka ny vokatra: Alika kely alika zaza alika kely sy zaza latsaky ny 6 volana: Ity vokatra ity dia tokony hotanterahina amin'ny taha 5 mg praziquantel sy fenbendazole 50 mg isaky ny lanjan'ny kg (mitovy amin'ny takelaka 1/2 isaky ny lanja 5 kg). Ny fitsaboana dia tokony hatao mandritra ny telo andro misesy. Alika kely tsy misy vidiny sy alika kely mampinono: Ho an'ny fifehezana ny Toxocara dia zava-dehibe ny kankana ny alika kely matetika amin'ny vokatra, amin'ny taha fatra 5 mg praziquantel sy fenbendazole 50 mg isaky ...
PROUDUCT Details FANAMPINY: Ho an'ny fifehezana ireto aretin'alika sy alika boribory alika sy alika kely ireto. Ascarids: Toxocara Canis, Toxascaris leonine (endrika olon-dehibe sy tara tsy dia lehibe). Hookworms: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (olon-dehibe). Whipworms: Trichuris vulpis (olon-dehibe). Tapeworm: karazana Echinococcus, karazana Taenia, Dipylidium caninum (olon-dehibe sy endrika tsy matotra). DOSAGE: Ho an'ny fitantanana am-bava fotsiny. Ny natolotra ...
PROUDUCT pitsopitsony FAMPITANDREMANA: Fitsaboana ny fanesorana ireo kankana boribory lehibe ary alika kely amin'ny alika sy alika kely. Izy io dia mandaitra ihany koa amin'ny fisorohana ny famerenana amin'ny laoniny ny T. canis amin'ny alika olon-dehibe, alika kely ary reny mampinono rehefa avy niasa tamin'ny DOSAFE SY ADMINISTRATION: Mitantana eran-sotrokely 1 (5 ml) isaky ny lanjan'ny vatana 10 lbs. Tsy ilaina ny mitazona sakafo alohan'ny fitsaboana na aorian'ny fitsaboana. Matetika ny alika no mahita an'io dewormer io mora vidy ary hilelaka ny fatra avy ao anaty lovia ...
PROUDUCT Details Details Toltrazuril dia anticoccidial miaraka amin'ny hetsika fanoherana ny Eimeria spp. amin'ny akoho amam-borona: - Eimeria acervulina, brunetti, maxima, mitis, nekatrix ary tenella amin'ny akoho. - Eimeria adenoides, galloparonis ary meleagrimitis amin'ny vorontsiloza. Famantarana Coccidiosis amin'ny dingana rehetra toy ny schizogony sy dingana gametogony an'ny Eimeria spp. amin'ny akoho sy vorontsiloza. Contra indications fitantanan-draharaha amin'ny biby tsy misy herin'ny ati-doha sy / na ny voa. Ny voka-dratsy ateraky ny dosia avo amin'ny layin ...
Composition: Contain per g: Amprolium HCl 20 mg Fanoritana: Amprolium HCl dia coccidiostat (anti-protozoal) izay miasa amin'ny fanakanana ny fampiasana thiamine amin'ny parasy protzoal, izay miteraka fikorontanan'ny metabolisma sela. Izy io dia manakana ny fampandrosoana ny merozoites sy ny fananganana taranaka faharoa. Ny amprolium dia voafafa haingana (ao anatin'ny ora maromaro) amin'ny vatana amin'ny alàlan'ny voa ary manana profil fiarovana tena tsara. Famantarana: Amprolium dia ampiasaina amin'ny fitsaboana sy fisorohana ny coc ...
FAMPANDROSOANA FARITRA Fenbendazole dia miady amin'ny katsentsitra amin'ny fanakorontanana ny fananganana microtubules amin'ny alàlan'ny fatorana amin'ny tubulin ao amin'ny sela tsinay parasitika ka manakana ny fidiran'ny glucose. Matin'ny mosary tsikelikely ny parasites. Fenbendazole dia mihetsika manohitra ny katsentsitra gastrointestinal maro ao amin'ny vavony sy ny tsinay biby. Izy io dia mavitrika amin'ny kankana boribory, ankylosome, trichuris, kankana kasety sasany, matanjaka ary mahery ary koa manohitra ny kankana ...
Fampahalalana momba ny PROUDUCT DESCRIPTION Fenbendazole dia anthelmintic bezabe benzimidazole izay ampiasaina amin'ny katsentsitra gastrointestinal ao anatin'izany ny cormorm, hookworms, whipworms, ny taenia karazana tapeworms, pinworms, aerulostrongylus, paragonimiasis, strongyles ary strongyloides. Amin'ny omby sy ondry, ny fenbendazole dia mavitrika amin'ny Dictiocaulus viviparous ary koa amin'ny larva ambaratonga faha-4 an'ny Ostertagia spp. Fenbendazole koa dia manana hetsika famonoan-olona. Fenbendazole dia miasa amin'ny fanakorontanana ny formatio ...